Bona kwaye babone izinto eziqhelekileyo abantu abaninzi abakwaziyo
INGABE ABANTWANA ABANYE ABANTU ABAKHONELEKILEYO? Abaphandi abaninzi bacinga ukuba abantwana, ukususela kwiminyaka emncinci nakwishumi elivisayo, banokukwazi ukufumana iziganeko eziqhelekileyo ngenxa yokuba abazange bahlakulele ubandlululo abaninzi abantu abadala abachasene naloo nto, "ingcali yezesayensi". Mhlawumbi abazange bazidale zabo izihlunu kwiimvakalelo kunye namava aninzi oluntu alujonga njengengqiqo okanye engaqhelekanga.
Okanye mhlawumbi ukuba ubuncinci bengqondo okanye iinjongo, ngenxa yesiphi na isizathu, ngokwenene ukuthobela iziganeko ezinjengezigwili, amava okufa-okufuphi , ukukhumbula kwangaphambili kunye nokuzimela .
Naliphi na isizathu, nantsi amabali ambalwa enyaniso avela kubafundi abonakala baqinisekisa ukuba abantwana banokwenziwa ngokungaqhelekanga kwizinto ezingaqhelekanga kunye nokungachazwanga:
Kwiminyaka edluleyo xa ndisemncinci, umama wandithatha kunye naye ukuba athathe omnye wabahlobo bakhe asebekhulile ukuba bamkhonze ecaweni. Asizange sihambe ngalobo busuku, kodwa umama wayehlala eyanceda abantu abakhulu ecaweni. Xa sifika kumngane womama wam, umama wandibuza ukuba ndiye emnyango ukuze ndixelele ukuba sasingamlindelanga.
Ndandila i-doorbell kunye nomfazi okhulile wavula umnyango, wathi "ndiyabonga" waza wandishiya emnyango emineni embalwa ngelixa wayegqibile ukulungela. Ibhedi kwindawo yokuhlala yindoda ekhulile yayikhuselekile ngasemnyango, kodwa ndabona umntu ehleli embhedeni wakhe phambi kweTV, evuliwe.
Akazange atshintshe okanye athethe nam njengoko ndimi apho. Ndandinentloni kwaye ndingazami ukuthetha naye. Ndiyakhumbula ngokucacileyo ukuba wayenekhati elimhlophe, ibhulukhwe emnyama, i-black nylon nezicathulo ezimnyama. Izandla zakhe zahlala emadolweni. Ndiyakhumbula ukuba isandla sakhe sagubha kwaye sabonakala sinobudala, omnyama kakhulu, indoda yase-Afrika-yaseMelika, kodwa ndandimise ngendlela endingayiboni ngayo ubuso bakhe.
Emva kwemizuzu embalwa, le ndoda ekhulile yambamba ingubo yayo yaphuma yangena emnyango. Washiya loo mntu ehleli elaleni lokulala ebukele umabonwakude, kodwa wayengatsho nto kuye xa ehamba. Ndacinga ukuba kwakuyinto engaqhelekanga, kodwa akazange athethe nto kuye.
Emva kokuba sitshitshise le ndoda ekhulile ecaweni, ndathi, "Mama, uMksk McClain washiya indoda endlwini yakhe, kodwa akazange athi kuye xa sishiya." Kwaye ndamxelela ukuba wayehleli elalongqeni lakhe phambi kweTV. Wandibuza ukuba wayebukeka njani kuba umninimzi kaMnu McClain weza kumtyelela ngamanye amaxesha. Ndacacisile into endiyibonayo kumama, kodwa wamxelela ukuba andizange ndibone ubuso bakhe. Umama wathi inkcazo endiyinike yona ayifani nelinye lomnini-mninikhaya, kuba wayeyindoda eluhlaza kakhulu.
Umama wayenomdla kakhulu, ngoko wabiza uMnu McClain ebandleni kwaye, ukuze angammangazi, wabuza, "Ngaba unayo inkampani? Intombi yam yathi uyishiye iTV yakho." UNksk McClain watshela umama ukuba akanalo nkampani ngaloo mini kwaye uyashiya iTV yakhe nanini na xa ephuma ngenxa yokuba ufuna abantu bacinge ukuba umntu uhlala ekhaya, ukuze kungabikho mntu oza kungena.
Ukuva oko kwamnkantya wam umama, kwaye ndicinga ukuba lo mfazi osekhulile unokuvakala ngelizwi lomama kwaye waqala ukumemeza, ebuza uMama, "Intombi yakho yabona ntoni?
Nceda ndixelele, intombi yakho yabona ntoni? Undityhola. Andikwazi ukubuyela apho. Wayebona ntoni? "Ndiyakhumbula umama ekufuneka axoxe naye ngokukhawuleza ukuba amthobise. Umama wamgqiba wamqinisekisa ukuba sazibuza ukuba kutheni eshiya umabonwakude.
Xa umama ekugqibeleni waphuma kwifowuni, sobabini sathuthumela. Ndandikhala ndiloyike kakhulu ukuba ndiza kubuya ndambona le ndoda kuba ngelo xesha sasiyazi ukuba kwakufuneka ibe yinto . Ndaqhubeka ndiphinda, "Ndivuyiswa kukuba andizange ndizame ukubona ubuso bakhe." Umama wandithuthuzela ngokuthi mhlawumbi umyeni kaMnu McClain, owayedlulile, wamjonga ngenxa yokuba wayeyedwa. Andizange ndiyambona le ndoda kwaye asizange sitshele uNksz McClain ukuba ndiyibonile loo nto ngokuhlwa ngaloo ndlu. - H. Holmes
YINTONI ABANYE ABABASEBENZI BABONA?
Xa umntakwethu omncinci wayesengumntwana, mhlawumbi iinyanga ezisi-9 ubudala, sasihlala kunye nomkhulu wam. Umkhulu wam usanda nje wafa. Umama wayesehleli egumbini lokulala malunga nobusuku bezama ukufumana umntakwethu alele, kodwa akayeki ukukhala. Ngokukhawuleza, ngaphandle kokuyeka ukukhala, wahlala ngqo wathi, "Hayi, umkhulu." Kwakungekho mntu kwenye egumbini. Into ebalulekileyo kukuba, wayethetha loo mazwi ngokucacileyo, kwaye wayengakaze athethe ngaphambili, kungekhona athi "mama"! - Beth B.
I-ANDY PANDY IYA KULAWULA
Uninzi lwabafundi bakho base-UK phakathi kweminyaka engama-45 no-55 baya kukhumbula umboniso weTV othiwa Bukela kunye noMama . Umboniso wawukho kwi-BBC kwiminyaka ye-1950 kwaye ibonakalise intambo yomthi enegama elithi "Andy Pandy", kwaye wayenecala elibizwa ngokuthi "Loopy Lou okanye Looby Lou".
Ngenye imini umntakwabo nodadewethu apho badlala phezulu emacaleni ethu okulala. Eli gumbi lalingama-12 ft. X 12 ft kwaye liphethe ikhabhinethi ekhoneni, elalikho ngqo kwizitepsi. Udadewethu nomntakwethu, bobabini ngoku sele beneminyaka engama-40 ubudala, bafunga namhlanje ukuba u -Andy Pandy waphuma kwikhabhoni ekhoneni waza wachitha ixesha elilandelayo edlala nabo bobabini. No-Andy Pandy, nangona kunjalo, yayingamamitha amane aphakamileyo kwaye yayingenamachocwe. Ndibabulele bobabini ngaphezu kweminyaka kwaye ibali labo lihlala lifana. - Mike C.
Ikhasi elilandelayo: Amava amaninzi
BENZELELA ABANTU ABAKHO
Xa ndandineminyaka emashumi asixhenxe ubudala, enye iveki ndiceba ukuhlala ngephantsi kweemidlalo zokudlala imidlalo yevidiyo kwaye ndilale ebhedeni lokukhupha. Ndandilungiselela ukuya kulala xa, ngenxa yesizathu esithile, ndandifumana into yokuba into endibukeleyo. Ndatshitshisa ngokwaneleyo ukuba ndibuyele phezulu, kwaye ngelixa ndiqhuba, ndabona kakhulu mfutshane (akukho mkhulu kunamantombazana amabini ubude) kunye namanani e-squat ahamba emva kwam.
Babengazi kakuhle kwiimpawu, kwaye babonakala bengenanto engaphezulu kweenky-black silhouettes .
Kwakhona, xa umninawa wayeselula, wayelele egumbini lomhlobo ekupheleni kwesitrato xa wathi " umntu wesithunzi " wabonakala enyaweni yombhede waza waqala ukubiza igama lomngane wakhe. Wememeza waza wathi yanyamalala phantsi.
Intsapho yomama (abazali nabazalwana babo) bahlala eBinghamton, eNew York. Ubaba wayeseMlambo kunye nabazali bam, mna nodadewethu sasihlala ePatuxent River, Maryland. Ndandineminyaka emithandathu ubudala ngelo xesha. Nangona sasihlala eMaldin, ndazi ininzi yintsapho yam umama kuba sasingabavakashela rhoqo eBinghamton, kwaye ngexesha lehlobo bonke beza kusityelela. Ngelo xesha, umzala wam, uMarylou, owayehlala eBinghamton, wayeneminyaka eli-11 ubudala.
Ndaya ekhaya ngisuka esikolweni ngolunye usuku ndacela umama ukuba kutheni uMarylou wayekhala. Wayengaqondi into endithetha ngayo.
Ndamxelela ukuba ndamva ekhala . Wayemangaliswa yinkcazo yam kwaye wayengenayo inkcazelo. Kwiiyure ezimbalwa, ifowuni yabhala. Nguye ugogo wayebizela ukuba umzala wam wayebethelwa yimoto ehamba ekhaya evela esikolweni-malunga nexesha elifanayo ndixelele umama ndingayiva ekhala. Ndinezinye iimboniselo ezimbalwa, kodwa nguyena ndiyakhumbula kakhulu.
UKUFUNA ABANTU NGOKWENZA
Ndandineminyaka engama-13 yaye kwakusele ixesha emva kokuba umntakwabo omncinane sele efile. Ndandifuna ukuba naye kuba ndicinga ukuba kuya kuba ngcono kuye kunokuba ekhaya. Ngobunye ubusuku ndalala embhedeni wam kwaye ndandiziva ndivakalelwa. Ndabona isandla esikhulu sifikela emilenzeni yam. Kwakushushu gqitha ukuba ndivuke. Ndothusa, kwakukho amadoda ayemi kufuphi nombhede wam, owawunxamnye nodonga. Bembethe ezimhlophe kwaye bekhala ngezinye iilwimi andizange ndive. Omnye wandijonga kwaye bonke benza kwaye bayeka ukukhala. Emva koko, bonke kwifayile enye, bahamba bephuma egumbini.
Ndaqhenqa ukuya ekupheleni kombhede wam kwaye ndakhupha umnyango ukuya kwigumbi lokuhlala. Kulapho sasinokukhanya. Baye bahamba. Ndanditshwenyeka kwaye ndinyuka ngaphantsi kwengubo kwaye ndaqala ukuthandaza . Emva koko omnye umzalwana wandibuza ukuba ndivukile. Ndathi ewe. Wandibuza ukuba ndize egumbini lakhe. Ndathi, "Akukho ndlela. Uya kuza." Kodwa ndikwazi ukufika kwigumbi lakhe, ukuze ndifumanise ukuba umntakwethu wayehambe into efanayo njengoko ndenze. Sasiyesaba. - Ruby
Xa umzala wam encinci, wayehlala etsho ukuba uye watyelelwa "ngumhlobo." Intsapho yam yayicinga ukuba lo ngumhlobo ocingayo .
Ngenye imini, ngelixa ndikhangele i-albhamu yesithombe, umzala wam wabona umfanekiso kayise omkhulu owafa emva kweminyaka embalwa ngaphambi kokuba azalwe. Wayengakaze abone lo mfanekiso ngaphambili. Uthe umntu osesithombeni (umkhulu wakhe) wayengumhlobo owayemtyelele rhoqo. Oku kuyithakazelisayo kuba utatomkhulu wancenga abazukulwana bakhe, kwaye ndandingacinga ukuba ufuna ukuhlangana nomntu owazalwa emva kokufa kwakhe. - UDennis noHeather S.
SHIRLEY UVUNA UMNTU
Umama undixelele eli bali, kwaye uhlala ekhala xa exelela. Akuzange ichazwe. Udadewethu, uShirley (izibulo), wafa ngo-Down Syndrome eneminyaka emibili ngo-1961. Phantse emibini iminyaka kamva, umama wayenomntwana, mntakwabo, uSteven.
Ngenye imini ngo-1962, umama wayesekhonteni enza umsebenzi othile, kwaye ubaba wayesekholisini kwindawo yakhe yokusebenzela.
USteven (uneminyaka yobudala) wayebhekisele emanzini emdlalweni. Umama wakuva, ecacileyo njengosuku, ilizwi likaShirley lathi, "Dadda! Dadda!" ... kwaye kwakunjengokuthi wayelungile apho ecaleni kwayo. Cima nje ngemini. Ubaba wamva INDLELA EYIQHELEKILEYO kwi-workshop yakhe. "Dadda! Dadda!" Bobabini bathetha ngokucacileyo ilizwi likaShirley - elivakalayo elicacileyo.
Utata wagijima waya kumama; Umama wagijima ukuxelela uyise. Bobabili babalekela emhadini, kwaye kwakukho umntwana uSteven onomatshini wokucoceka oomatshini weplastiki owawufikelele embhedeni. Umama nobawo bobabini basitshela kamva kuba kwakungeke kube nguSteven ebabiza; Wabiza ubaba, "utata" akayi "dadda," kwaye kwakungekho ilizwi lakhe. Baqinisekile ukuba nanamhlanje ukuba uShirley wayebaxwayisa ukuba umntakwabo wayegulisa. - uDonna B.
Into enokuyenza Ukuba Uyabona okanye Uva uMoya
Ngaba i-iPhone iComputer Record Recording ye-EVP?
Ungayibona Njani uMoya?
2015 Iqiniso leMoya kunye neParanormal Stories
Kutheni Ndikwazi Ukubona Amagqabi?
Kutheni i-Orbs kwiZithombe ayikho ubungqina beParanormal
Ukunyaniseka kwezinto eziqhekezayo onke amaxesha
Umoya wokulila weKerala
Indlela yokunika uMoya okanye i-Monster Ukubheka
Ngaba Ndingenza Ibhizinisini okanye Yenza Ibhizinisi?
Ukuhlanganiswa Inkcazo kunye nemizekelo
Funda iSisiseko ngeMars: I-Home elandelayo yoBantu!
Isikhokelo kuzo zonke iimpawu zeMathematika kunye nezinto ezizibonakalisayo
Indlela Yokufumana Umsebenzi Wakho Wasekhaya Ewenziwe kwiKholeji
Iingcaphuno zokuSebenzisa kwiSigqabi kuMtshato weDade wakho
Iingcebiso zokubulela iiNtsapho zamaKristu
Izifundo zokuQala zokuBhala
IGeorge Southwestern State Admissions
Ukwahlukana phakathi kweqela eliQela kunye nexesha lexesha
Yintoni Intaba Intlekele?